व्यक्तिको पेटमा मोवाईल देखेपछि चिकित्सक नै चकित ! [ फोटो फिचर ] « Nepal Bahas
व्यक्तिको पेटमा मोवाईल देखेपछि चिकित्सक नै चकित ! [ फोटो फिचर ]
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७८, सोमबार १३:४२
२९ कार्तिक, एजेन्सी । एक व्यक्ति निकै पेट दुखेपछि चिकित्सक कहाँ जान्छन् । केही घन्टापछि चिकित्सकले उनको पेटको एक्सरे गर्छन् । एक्सरे रिपोर्टमा ती व्यक्तिको पेटमा मोवाईल देखेपछि चिकित्सक नै चकित हुन्छन् । उनको तत्कालै शल्यक्रिया हुन्छ । यो हो पश्चिमी इजिप्टको आसवान युनिर्भसिटी अस्पतालको घटना ।
समाचार विवरणअनुसार ती व्यक्तिले ६ महिनाअगाडि एउटा मोबाईल फोन निलेका थिए । स्वभाविक प्रक्रियाबाट दिशामार्फत मोबाईल बाहिर निस्कने आशामा उनले कसैलाई पनि भनेनन् । किनकी, आफ्नो अस्वभाविक कामबाट उनी आफै लज्जित थिए । तर, पेट दुखेर सा(है पिडा हुन थालेपछि उनी चिकित्सककहाँ गएका थिए । मोवाईलका कारण उनलाई खान पनि असजिलो भएको थियो ।
मोवाईल पेटबाट निकाले पनि ती व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थप केही बताइएको छैन् । शल्यक्रियापछि ती व्यक्ति पूर्ण रुपमा स्वस्थ हुने चिकित्सकहरुको विश्वास छ । उनले किन मोवाईल खाए भन्ने बारेमा इजिप्टका सञ्चार माध्यमहरुले केही खुलाएका छैनन् ।
भारत र पाकिस्तान छुट्याउने रेखामा जन्मियो सीमा !
साउदी दुलाहा जो विवाह गर्दागर्दै परीक्षा दिन पुगे !